३३.५ किलो सुन खोज्न यातना दिँदा सनमको मृत्यु
विराटनगर, २० फागुन । मोरङको उर्लाबारी ७ का ३६ वर्षीय सनम शाक्यको हत्या थप रहस्यमय बन्दै गएको छ । विराटनगर–३ दुर्गाचोकमा शनिबार दिउँसो शाक्यको शव स्कर्पियो गाडीको सिटमा भेटिएको थियो । शाक्यको शव भेटेसँगै प्रहरीले घटना हुनुमा सुन तस्करी मुख्य कारण...
प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले सपथ लिए
काठमाडौं, २० फागुन । निर्वाचित भएको करिब ३ महिनापछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले आइतबार सपथ लिएका छन् । संसद भवनमा आयोजित कार्यक्रममा जेष्ठ सदस्य राजपाका महन्थ ठाकुरले सांसदहरुले सपथ गराउनुभएको हो । सांसदहरुलाई सपथ गराउनु अगाडि ठाकुरले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष...
हिस्टानको प्रदेश समिति गठन
बेलवारी, २० फागुन । माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपाल (हिस्टान) को पहिलो पटक १ नम्बर प्रदेशस्तरीय प्रदेश सम्मेलन आयोजक समिति गठन भएको छ । मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित रहेको सुकुना माध्यमिक विद्यालयमा शनिबार भएको प्रदेशका +२ पढाउने शिक्षकहरुको भेलाले नयाँ समिति...
काठमाडौं, २० फागुन । संघीय संसदको सभामुखको निर्वाचन फागुन २६ गते हुने भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ राजनीतिक दलको बैठकले सभामुखको निर्वाचन फागुन २६ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । संसदका उपसभामुखको निर्वाचन भने चैत २...
दाइजो विरुद्ध मुस्लिम आवाज
इनरुवा, २० फागुन। समाजमा विकृतिको रूपमा फैलिएको दाइजो प्रथा अन्त्य हुनुपर्नेमा सुनसरीका मुस्लिम अगुवाले जोड दिएका छन् । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित नहर चौकमा आयोजित समाज सुधारक विषयका कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले समाजमा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको दाइजो प्रथा सदाका लागि...
सडकको फोहोर टिप्दै महानगर प्रमुख (फोटाहरू)
विराटनगर, २० फागुन । दारी ग्याङको अगुवाइमा विराटनगर महानगरपालिकाको भित्री सडकको सरसफाइ सुरु भएको छ । सरसफाइ अभियानमा महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, विभिन्न युवा समूहहरूको सहभागीता छ । आइतबार १० बजेदेखि विराटनगरको व्यस्त बजार बि प्लटबाट सुरु भएको सफाइ अभियान...
प्रदेश सरकारले पुरक बजेट ल्याउँदै
विराटनगर, २० फागुन । प्रदेश नं. १ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चैत १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट तयारी गर्न बैठकले...
मिस लियो अनुपमा ‘मिस नेपाल’ होलिन् ?
विरानटगर, १९ फागुन : द हिडेन ट्रेजररले आयोजना गर्ने मिस नेपालको २३ औं संस्करणमा विराटनगरकी अनुपमा बाँस्तोला अन्तिम २५ मा छनोट भएकी छन् । देश तथा विदेशका २ सय ३१ प्रतिस्पर्धिमध्येबाट बाँस्तोला अन्तिम २५ मा पर्न सफल भएकी हुन् ।...